Nicolas Dupuis: mikasa hanangona Barea 20 any Frantsa - ewa.mg
Foot - News - Sport - Nicolas Dupuis: mikasa hanangona Barea 20 any Frantsa
Miasa hatrany i Nicolas Dupuis, na
ao anatin’ny fanatanterahana ny fihibohana amin’ny ady atao amin’ny
valanaretina coronavirus aza. Nambarany, ny faran’ny
herinandro teo fa manana fikasana hanangona Barea miisa 20 any
Frantsa ny tenany miaraka amin’ireo teknisianina efa niara-niasa
taminy hatramin’izay. «Tsy maintsy tsinjovina dieny izao, ireo
hisolo toerana ireo mpilalao efa nahazoazo taona», hoy izy. Na
izany aza, tsy mbola voafaritra na efa nisy anarana nambarany fa
vao eo am-piresahana amin’ireo olona any Frantsa izy, amin’izao
Efa nalaza tao anaty
tambajotran-tserasera kosa nandritra ny andro vitsivitsy izay, ny
amin’ireo mpilalao roa lahy izay voalaza fa manana ra malagasy dia
i Kevin Theophile Catherine, izay milalao ao amin’ny Dynamo de
Zagreb. 31 taona izy, ankehitriny ary vodilaharana no toerana misy
azy. Araka ny fantatra efa manana traikefa amin’ny fiatrehana lalao
lehibe maro izy, ka anisan’izany ny fiadiana ny ho tompondakan’i
Eoropa «ligue des champions». Eo ihany koa i Loic Lapoussin, 24
taona ary mitana ny toeran’ny irakiraka.
Ankoatra izay, efa mijery sy
mandinika ny lalaon’ireo ekipa hifanandrina amin’ny Barea, eo
amin’ny fifanintsanana ho an’ny “Can 2021?” sy ny “Mondial 2022”, i
Nicolas Dupuis, amin’izao fotoana izao. Tsy nohadinoiny koa ny
niresaka ilay Academie Elite des Barea, izay hanomanana ireo
katitakely ho Barea rahatrizay. “Raha vao tapitra ity
fihibohana ity ka resy tanteraka ny coronavirus, avy hatrany dia
hitsirika ireo ankizy ho ao anatin’io Akademia io isika”, hoy
Farany, nanome fankaherezana ho
an’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny “Orange pro league” ny tenany
amin’ny ezaka efa natao sy vita ary ny mbola hatao.
L’article Nicolas Dupuis: mikasa hanangona Barea 20 any Frantsa a été récupéré chez Newsmada.
Barea - Nicolas Dupuis
Tsipy kanetibe: tompon’ny amboara ny UBM Ambohitrimanjaka
Ny ekipan’ny UBM Ambohitrimanjaka no nandrombaka ny amboaran’i Madagasikara, taranja tsipy kanetibe, sokajy lehilahy. Lasan’ny ekipan’i Matsiatra Ambony kosa izany teo amin’ny vehivavy.Tontosa tany amin’ny kianjan’Andraikiba Vakinankaratra, ny alahady lasa teo ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara, taranja tsipy kanetibe, ho an’ny olo telo miaraka tamin’ireo sokajy efatra dia ny “senior” lahy sy vavy, ny “junior” ary ny “veteran”. Norombahin’ny ekipan’ny UBM Ambohitrimanjaka, nahitana an’i Avotra, i Haja ary i Bela ny fandresena rehefa nandavo an’i Tendry, i Teddy ary i Bôla, avy amin’ny Club Bouliste Villa Vatosoa Analamanga teo amin’ny famaranana, tamin’ny isa mazava. 13 no ho 5. Tsy niady ny fihaonana tamin’ity satria tsy nahatohitra ireo mpilalaon’ny UBM mihitsy ry Tendry. Ho an’ny vehivavy indray, norombahin’ny CBAT Ambalavao Matsiatra Ambony, nisy an’i Ando, i Mbola ary i Lova ny amboara. Resin’izy telo mirahavavy tamin’ny isa 13 no ho 5 ihany koa ny ekipan’ny C2BA Vakinankaratra nisy an’i Cicine sy i Tita ary i Vola. An’Analamanga ny zandrinyNy CB MAMA Analamanga kosa no voalohany ho an’ny sokajy zandriny “junior”, nahitana an’i Stephano, i Tsiry ary i Ony rehefa nandresy an’i Nirina, i Romeo ary i Rolland avy amn’ny C2BA Vakinankaratra, tamin’ny isa 13 no ho 8.Tsy nivoaka ny faritr’i Vakinankaratra kosa ny amboara ho an’ny “veteran”, rehefa lasan’i Clément sy i Jean Claude ary Randrianomanana, mpilalaon’ny C2BA. Lavon’izy ireo teo amin’ny famaranana, tamin’ny isa tery 13 no ho 12 ny ekipan’ny BIC Ambohimasoa Matsiatra Ambony, nisy an’i Celestin sy i Claude ary i Oeliniony.Nahatratra 366 ny isan’ireo mpandray anjara avy amin’ny ligim-paritra miisa 8 sy ireo faritra telo hafa efa ao anaty federasiona, saingy tsy mbola nahatsangana ligy dia i Sambava, Ambositra ary i Fandriana.Dingana manaraka ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, ho an’ny olon-telo miraka lehilahy “senior”, hotanterahina eto Antananarivo ny 4 sy 5 septambra ary any Toamasina ny an’ny vehivavy sy ny “veteran” ary ny “junior” ny 11 sy 12 septambra, ho avy izao. TompondakaL’article Tsipy kanetibe: tompon’ny amboara ny UBM Ambohitrimanjaka a été récupéré chez Newsmada.